SAWIRO:- Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya furay Mashruuca taageerada horumarka Qaxootiga dalka
Hiiraan Xog, Jun 20, 2018:- Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ahna Ku-simaha Ra’iisul Wasaaraha, Mahdi Maxamuud Guuleed ( Khader) oo maanta furay Mashruuca taageerada horumarka iyo dhaqan gelinta siyaasado lagu Daryeealyo Qaxootiga dalka kusoo laabanaya iyo Barakacaasha gudaha ayaa sheegay in ay muhiim tahay in laga wada tashado sidii xal waara loogu heli lahaa...
DAAWO SAWIRO:- Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo la kulmay masuliyiin ka tirsan xukumada Norway
Hiiraan Xog, Jun 20, 2018:- Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, oo ku sugan magaalada Oslo ee dalka Norway ayaa kulan la qaatay dhiggiisa dalka Norway, Erna Solberg. Labada Ra’iisul Wasaare ayaa kawada hadlay adkeynta Xariirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Norway, horumarka, maal-gashiga, kobcinta dhaqaalaha, iyo taageerada hay’adaha...
AKHRISO:- Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka jawaabay hadalkii Madaxweyne Farmaajo
Hiiraan Xog, Jun 20, 2018:- Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka Soomaaliyeed ayaa ka jawaabay Wareysi uu xalay siiyay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo TV ga dowladda. Xildhibaanka waxaa uu sheegay in Madaxweynaha uusan ka jawaabin Su’aallo badan oo ay u baahnaa in jawaab laga siiyo Shacabka Soomaaliyeed ee dhageysanayay. “Waxaa...
Dowlada Imaaraadka oo Soomaaliya ku dartay liiska wadamada Amni darada ka jirta
Hiiraan Xog, Jun 20, 2018:- Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in ay jiraan khataro amni oo kusoo wajahan gudaha dalka Soomaaliya, waxaana ay soo dirtay digniin ku aadan in muwaadiniinteeda ku sugan Soomaaliya ay muujiyaan feejignaan dheeri ah. Dowladda Imaaraadka ayaa Soomaaliya ku dartay Liiska 13 dal oo Muwaadiniinteed uga digtay inay uu safraan sababo amni daro...
Masuuliyiin ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir oo xilka laga qaaday
Hiiraan Xog, Jun 20, 2018:- Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng Yariisow) ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa uu xilalkii ka qaaday Mas’uuliyiin ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir sidda ay Warbaahinta u xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadkii xilalka laga qaaday. Tan iyo Bishii Ramadaan waxaa gobolka Banaadir ka socotay...
Dowlada Eritrea oo Ergo u diraysa dalka Itoobiya si ay u bilaawdan wadahadalada
Hiiraan Xog, Jun 20, 2018:- Dowladda dalka Eritrea ayaa Ergo u diraysa dalka ay dariska yihiin ee Itoobiya si ay u billaabaan wadahadalladii lagu dhaqan galin lahaa heshiiskii nabadda ee soo afjaray colaaddii xadka ee labada dal dhexmartay sanadadii lasoo dhaafay. Bishan horraanteedii ayuu xisbiga wadaaga ah ee Talada Itoobiya haya sheegay in uu si buuxda u aqbalayo go’aamadii...
Dowlada Maraykanka oo isaga baxay Golaha Xuquuqul insaanka ee Qaramada Midoobay
Hiiraan Xog, Jun 20, 2018:- Maraykanka ayaa isaga baxay Golaha xuquuqul insaanka ee Qaramada Midoobay, isaga oo ku tilmaamay “mid aan dhexdhexaad ahayn”. Golahan “munaafaqa ah ee danahiisa uun eegta xuquuqda aadanaha ayuu ku jeesjeesaa”, ayay tiri Nikki Haley oo ah safiirka Maraykanka u fadhida Qaramada Midoobay. Haley, ayaa sannadkii hore ku eedaysay...
Dowlada Kuuriyada Koonfureed oo sheegtay in Pyongyang aan dhakhsa xayiraadda laga qaadi doonin
Hiiraan Xog, Jun 20, 2018:- Wasiirka Arrimaha dibadda dalka Kuuriyada Koonfureed, Kang Kyung-wha, ayaa sheegtay in xayiraadaha saaran Kuuriyada Woqooyi ay wali sii jiri doonaan tan iyo inta gebi ahaanba dalkaasi uu ka burburinayo hubkiisa niyuukleerka. Haweeneydan ayaa sheegtay in ay fileyso in Kuuriyada Woqooyi ay qaado tallaabo adag oo ay ku baabi’ineyso hubkeeda...
Xuutiyiinta ka dagaalama dalka Yemen oo laga qabsaday Dekedda Xudayda
Hiiraan Xog, Jun 20, 2018:- Xuutiyiinta ka dagaalama dalka Yemen ayaa laga qabsada inta badan Dekedda Xudayda ee dalkaas. Waxa halkaa maalinnimadii oo dhan ka socday dagaal culus oo dhex marayey xoogaggaas oo ay taageerayaan huwanta Sucuudigu hogaaminayo iyo fallaagada Xuutiyiinta. Muuqaalo Telefishanadu baahiyeen ayaa muujinayey in dagaalyahanno ka tirsan isbahaysiga...